Mamafa Ny Tantaran’i Ethiopia Amin’ny Anaran’ny Fampandrosoana · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Endalkachew Chala
Voadika ny 01 Desambra 2012 14:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, English, 繁體中文, Ελληνικά, 简体中文, አማርኛ
Tamin'ny 1896 no resin'ny tafika notarihan'ny Amperora Menelik II ny tafika Italiana izay nanana ny teknolojia ara-miaramila nandroso kokoa tao amin'ny fifanandrinana tao Adwa. Taorian'izany, nampiditra teknolojia maromaro ilay Amperora nandresy ka anatin'izany ny fampidirana ny lalamby tao amin'ny fireneny. Noho ny fandreseny tao Adwa sy ny ezaka nataony hanovàna an'i Ethiopia araka ny fombany manokana, nisy tsangambato ho fanomezam-boninahitra azy najoro tao afovoan'i Addis Ababa antsoina hoe Arada.
Efa ho efapolo taona taoriana, tamin'ny 1935, nanao fanafihana ara-miaramila vaovao tsara omana kokoa nataon'ny mpitarika ady tamin'izany fotoana izany indray ny Italiana. Niezaka nanao izay hibodoana an'i Ethiopia tao anatin'ny fotoana fohy ny Italiana fa niatrika fanoherana mavaivay avy amin'ny Ethiopiana.
Manontany [amh] i Daniel Kiberet, bilaogera zatra manoratra momba ny kolontsaina, tantara ary fivavahan'i Ethiopia:
Abush Zekaryas nampahatsiahy toe-javatra iray vao nampisy adihevitra, nitranga tany Italia rehefa nisy tanàna kely iray ao atsinanan'i Roma izay nanangana fahatsiarovana ho ana mpitarika miaramila fasista, ny jeneraly Rodolfo Graziani, mampiasa ny volam-bahoaka. Nanoratra izy [amh]:
Ary Aderegen, vondrona bilaogera tsy fantatra anarana, namoaka izao tamin'ny bilaogy [amh]:
Saingy namoaka tantara mifanohitra amin'izany ny fampitam-baovao mpanohana ny fitondrana, Fana Broadcasting Corporate, ka milaza fandàvana ny fandravana ny tsangambaton'ireo olomanga ho fanamboarana lalamby! [amh]:
Ity no fanindroany tamin'ity taona ity ka misy tsangambato nampiteraka adihevitra tamin'izay nataon'ny fitondrana Ethiopiana. Ny tsangambaton'i Kwame Nkrumah, izay natao teo amin'ny foiben'ny Vondrona Afrikana, izay natsangana noho ny fanampian'ny fitondrana Shinoa, ihany ka dia niteraka hatezerana teo amin'ny Ethiopiana satria maro ny Ethiopiana mahatsapa fa mendrika fankatoavana ihany koa i Haile Selassie.